Saripika mangatsiaka miaraka amin’ny Sketch mora sy hevitra miloko avy amin’ny fitaovana picker loko
Tany tsy misy zavakanto eh !, Ny hosodoko iray dia kanto ankafiziko. Fantatrao daholo fa ny ampahany mafy indrindra hoso-doko dia ny manomboka. Amin’izany toe-javatra izany, dia mila mahita ny soritsoritra mangatsiatsiaka ianao na ny hodi-damosana hosodoko mora ilazana azy. Tsara izany, tsara raha mandinika sary manintona mahafinaritra ianao izay mety ho hevitra tsara ho an’ny hosodoko manaraka. Hitanao fa misy teknikan’ny sary hosodoko azonao ampiharina. Tsy lazaina intsony fa tsara ny mampihatra sary hosodoko amin’ny kofehy.
Mazava ho azy fa ity lahatsoratra ity dia hampiseho aminao ny sary hoso-doko tumblr izay avy amin’ny sary miloko mahafinaritra mankany amin’ny tsotra. Mazava ho azy fa azonao ampiharina eo amin’ny fototry ny sary. Eny tokoa, ny sary hosodoko dia toy ny maka sary. Samy manana tanjona mitovy daholo izy roa ireo dia ny hamorona sary ahafahana milaza tantara iray. Azonao atao ny mamorona ny tantara amin’ny canvas mtu na amin’ny haza nofinofy aza.
Inona no fantatrao momba ny sary hosodoko?
Eny, ny sary hosodoko dia ampahany amin’ny zavakanto. Rehefa maheno momba ny hosodoko ianao dia tsy maintsy mahatadidy koa ny bursh, loko, tsaramaso palette, sponjy ary airbrush. Mazava ho azy, sary hosodoko no vokatry ny hetsika ary zavatra ny sary hosodoko.
Tsisy diky, azonao atao ny milaza fa ny sary hosodoko dia raisina ho toy ny kanto satria mifandraika amin’ny endriny fa tsy ny fombany na ny teknika aza. Eny, ny zavakanto graffiti sy ny hoso-doko amin’ny loko dia karazana loko hoso-doko. Hitanao, ny endrika arcylic dia endrika maoderina amin’ny endrika hosodoko. Noho izany, raha te hamorona zavatra maoderina ianao, ny acrylic tehnique dia tsara indrindra ampiharina.
Inona no Karazan-doko Tehcnique 32?
Sary hosodoko Tempera
Ary, inona ny Styles hosodoko?
Raha ny fampahafantarana, misy karazana sary hosodoko roa tokony ho fantatrao. Ny firt dia fomba tandrefana ary ny faharoa kosa ny fomba atsinanana. Sarotra amin’ny rehetra, eto ny lisitry ny fomba tandrefana amin’ny sary hosodoko:
Figurativism / Art of Figurative
Art Deco – zavakanto fahitana, maritrano ary endrika endrika
Art Nouveau – aingam-panahy avy amin’ny natiora
Mandritra izany fotoana izany, ny fomba amam-borona amin’ny sary hosodoko dia:
sary hosodoko sinoa
sary hosodoko japoney
Sary hosodoko Indiana: Tanjore, Mughal, Rajasthani ary Pattachitra
Mampiasà picker loko mba hahazoana fitaomam-panahy
Firy aminareo no sosotra mampiasa loko mitovy amin’ny hoso-doko? Eny, mety mila mahafantatra ianao fa ny mpahazo loko dia afaka manome anao hevitra miloko 1.8 tapitrisa mahery. Ny tiako tenenina dia rehefa mahita sary iray ianao dia mety mahita loko tianao aroso amin’ny sary hosodokoo. Saingy, inona no mitranga raha tsy afaka manome loko tianao ianao? Hahazo misavoritaka ianao!
Tena tsara, raha mampiasa ny loko loko ianao dia ho fantatrao ny lisitry ny fandokoana ao anaty sary, sary na sary. Raha ny fampahalalana dia mora ampiasaina ny fitaovana ary maharitra adiny iray eo no ho eo. Mila manomana ny sary tianao ianao handinika ny lokony ary ho hitanao ny antsipiriany amin’ilay sary. Ny fampahalalana sasany azonao hitanao dia ny anaran’ny loko, ny RGB, ary ny HEX koa. Inona no fitaovana tsara, tsy izany ve?
Ahoana ny fampiasana loko mpametaka loko?
Toa tsy afaka miandry ianao raha tsy afaka mampiasa loko miloko. Noho izany, raha tsy misy tohiny, azonao atao ny mandinika ireo dingana mifandimby mba hampiasa ny mpividy loko. Iny ianao no lasa!
Dingana 1: Makà sary, sary na sary amin’ny fitaovanao
Ny zavatra voalohany, voalohany dia mila maka sary, sary na izay antsoinao hoe sary eo amin’ny fitaovanao. Mazava ho azy fa azonao alaina ao amin’ny Internet. Ankoatr’izay, azonao atao ny mijery azy amin’ny loharano iray hafa. Raha manana fakantsary ianao dia afaka maka sary koa ilay zavatra.
Dingana 2: Ampidiro ny sary, ny sary na ny sary amin’ny fitaovana mpikirakira loko
Raha hitanao dia manome habaka hampidinana ity sary ity ity fitaovana manaraka ity. Eny, mila maka misafidy sary, sary na sary ianao.
Dingana 3: Mametraha fanazavana sasany momba ny sary
Aorian’ny famoahana ny sary dia mila manisy famaritana sasantsasany ianao. Soa ihany fa mila miditra efatra fotsiny ianao vao hamita ilay saha.
Dingana 4: Tsindrio ny bokotra “Alefaso”
Ary, azonao atao ny manindry ny bokotra fandefasana mba hanohizana amin’ny dingana manaraka.
Dingana 5: Tadiavo ny vokatry ny mpikaroka loko
Farany! Efa narotsanao ilay sary. Ankehitriny, hisy valiny sasany hiseho eo amin’ny efijery. Mazava ho azy, ho afaka hahita ny antsipirihany sasany toa ny HEX, RGB, ary ny anarana ny loko. Azonao atao ny mamerina ny dingana amin’ny fampiasana sary, sary na sary samihafa mba hahitana loko vaovao. Maka fahafinaretana!
Hitanao fa manana sary isan-karazany ny sary narotsanao.
Ankehitriny, azonao atao ny mampihatra ireo loko ireo ho an’ny hevitra hosodoko.